जाडोमा दही खानु हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव || जीवनशैली
जाडोमा दही खानु हुन्छ कि हुँदैन ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव
काठकाडौं । दही स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो छ। यो एक महान प्रोबायोटिक मानिन्छ। प्रोबायोटिक्सले हाम्रो एलिमेन्टरी नहरमा राम्रो ब्याक्टेरिया बढाउँछ, जसको कारणले हाम्रो पाचन प्रणाली ठीक रहन्छ।
गर्मीमा दही, दही, लस्सी यी सबै मानिसहरू धेरै पिउने गर्छन् । जाडोमा दहीले हानि गर्छ भन्ने धेरैको विश्वास छ ।
यसले खोकी र घाँटी दुख्न सक्छ। दही मन पराउने र यसलाई खानासँगै नियमित खानेहरूका लागि जाडोमा दही त्याग्न गाह्रो हुन्छ । यहाँ जान्नुहोस् आयुर्वेदले यसबारे के सल्लाह दिन्छ र विज्ञानले के भन्छ ।
आयुर्वेदले के भन्छ जान्नुहोस्
जाडोमा आलु पराठा, कचोरी, ताहरी, खिचडी जस्ता धेरै परिकार हुन्छन् जुन दही वा राइता बिना अधुरो लाग्छन् ।
दही खाँदा घाँटी दुख्ने र रुघाखोकी लाग्ने धेरैको विश्वास छ । आयुर्वेदमा पनि जाडोमा दही नखान सल्लाह दिइएको छ । यसले म्यूकस बढाउने विश्वास गरिन्छ। यसको प्रकृति कफजन्य छ।
पहिले देखि नै श्वासप्रश्वास र खोकी सम्बन्धी समस्या भएकाहरुको समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले आयुर्वेदमा जाडोमा विशेषगरी साँझमा दही खान निषेध गरिएको छ । यदि तपाईलाई यस्तो समस्या छ भने बेलुका ५ बजे अगाडि दही खान सक्नुहुन्छ ।
जान्नुहोस् विज्ञानले के भन्छ ?
अर्कोतर्फ, विज्ञान अनुसार, दही एक प्रोबायोटिक हो, त्यसैले यो तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को लागी राम्रो छ।
यसमा क्याल्सियम, भिटामिन बी १२ र फस्फोरस पनि प्रशस्त पाइन्छ। जाडो मौसममा हाम्रो शरीरमा धेरै प्रकारका इन्फेक्सन चाँडै देखिने भएकाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउनु पनि जरुरी हुन्छ ।
सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको चिसो दही नखानु हो । साथै दहीले घाँटी दुख्ने, खोकी वा रुघाखोकीजस्ता समस्या निम्त्याएको अनुभव छ भने दही नखानुहोस् ।
दिनको समयमा, कम अमिलो र कोठाको तापक्रममा राखिएको दही खान सकिन्छ यदि तपाईलाई यसको एलर्जी छैन। कहिलेकाहीँ दहीको एलर्जीका कारण खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता गुनासो आउने गर्छ । चिसो, खोकीमा दहीको सेवनबाट बच्न सकिन्छ ।
वाफ लिनुकाे फाइदा : रुघाखोकीमा आरामसँगै छालाको चमक बढाउँछ
खोप कार्ड हराएमा के गर्ने ? यस्ता छन् प्रतिलिपि पाउने तीन तरिका
काेभिडबाट श्वास फेर्न गाह्रो भयो ?, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेका १६ सुझाव